စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်ပြီး တံဆိပ်တပ်ထားသော ရေခဲသေတ္တာ၊ အအေးခန်းနှင့် ရေခဲသေတ္တာ | Nenwell ရေခဲသေတ္တာ
ရေခဲသေတ္တာ (အအေးခံစက်) နှင့် ရေခဲသေတ္တာများအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော အမှတ်တံဆိပ်ဖြေရှင်းချက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်မော်ဒယ်များ၏ကျယ်ပြန့်အပြင် စီးပွားဖြစ်ရေခဲသေတ္တာများ (အအေးခံစက်များ) နှင့် ရေခဲသေတ္တာများ၊ Nenwell သည် မတူညီသော အပလီကေးရှင်းများနှင့် လိုအပ်ချက်များအတွက် ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များ၊ ဒီဇိုင်းများနှင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် အံ့မခန်းလုပ်ဆောင်နိုင်သော ရေခဲသေတ္တာများနှင့် ရေခဲသေတ္တာများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းတွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် တံခါးလက်ကိုင်နှင့် အခြားထူးခြားသောပုံစံ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ထားသော သင့်ရေခဲသေတ္တာကို လိုချင်သည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို သိရှိနိုင်စေရန် သို့မဟုတ် သင့်အချိုရည်နှင့် အစားအစာများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုဂို သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်ပါဂရပ်ဖစ်ဖြင့် ရေခဲသေတ္တာမျက်နှာပြင်ကို ပရင့်ထုတ်ပါ။
ယနေ့ခေတ်တွင် စားသုံးသူများသည် ဈေးဝယ်ထွက်၍ အစားအသောက်များ စားသုံးသည့်အခါတွင် အရည်အသွေးနှင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ် စားသုံးမှုအတွေ့အကြုံများ ပိုမိုလိုအပ်လာသောကြောင့် အအေးခန်းယူနစ်များနှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်နေသော အသွင်အပြင်နှင့် စတိုင်လ်များဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော အအေးခန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။ မှန်တံခါးရေခဲသေတ္တာ နှင့် မှန်တံခါးရေခဲသေတ္တာ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အသွင်အပြင်နှင့် စတိုင်လ်များဖြင့် လာပါက သင့်အဖျော်ယမကာနှင့် အစားအသောက် ထုတ်ကုန်များကို သုံးစွဲသူများ မျက်စိကျစေရန် လက်လီနှင့် စားသောက်ရေး လုပ်ငန်းအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ Nenwell Refrigeration သည် သင့်အား စိတ်ကြိုက်တံဆိပ်ရိုက်ထားသော ရေခဲသေတ္တာများနှင့် ရေခဲသေတ္တာများအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းချက်များနှင့် ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ရေခဲသေတ္တာ (အအေးခံစက်) နှင့် ရေခဲသေတ္တာများအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော ရွေးချယ်မှုများ
Nenwell သည် သင့်အား မတူညီသော စီးပွားဖြစ်အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့် လိုအပ်ချက်များအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ရေခဲသေတ္တာများ (အအေးခံစက်များ) နှင့် ရေခဲသေတ္တာများပြုလုပ်ရန် စိတ်ကြိုက်နှင့် တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဖြေရှင်းချက်များအား သင့်အား ပေးဆောင်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့် စတိုင်အမျိုးမျိုးတို့သည် ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များနှင့် ပရောဂျက်များဖြစ်လာသည်။
စိတ်ကြိုက် အတိုင်းအတာနှင့် သိုလှောင်မှု စွမ်းရည်
စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားနှင့် စွမ်းရည်သည် သင့်အား သင့်လုပ်ငန်းတည်ထောင်မှုတွင် သင့်ရေခဲသေတ္တာယူနစ်များကို စုံလင်စွာနေရာချထားနိုင်စေပါသည်။ ပြီးလျှင် သင်စားလိုသော ပမာဏအလိုက် သင့်ဗူး သို့မဟုတ် ပုလင်းအရေအတွက်အတိအကျကို သိမ်းဆည်းပါ။
အချို့သောမော်ဒယ်များသည် အခြေခံဖွဲ့စည်းမှုအဖြစ် တည်ငြိမ်အေးပေးစနစ်ဖြင့် ပါ၀င်သည်၊ ၎င်းသည် ချွေတာသောရွေးချယ်မှုအတွက် စံပြဖြစ်သည်။ သို့သော် လေလည်ပတ်မှုနှင့် ပျော့ပျောင်းမှုတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ပန်ကာအကူအညီဖြင့် အအေးပေးစနစ်ကို သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက် ရနိုင်ပါသည်။
ထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် မျက်နှာပြင်ပြသမှု ရွေးချယ်စရာများ
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ရေခဲသေတ္တာများနှင့် ရေခဲသေတ္တာများကို စိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် ထားရှိလေ့ရှိသည်၊ ၎င်းသည် ချွေတာသောနည်းလမ်းတစ်ခုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အပူချိန်မျက်နှာပြင်ပါသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အမျိုးအစားကိုလည်း သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက် ရနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် လည်ပတ်ရန် လွယ်ကူချောမွေ့သည်။
ကွဲပြားခြားနားသော LED Lighting ရွေးချယ်မှုများ
သင့်ရွေးချယ်စရာများအတွက် တောက်ပပြီး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် LED အလင်းရောင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ရေခဲသေတ္တာယူနစ်များကို ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် မျက်စိမမြင်သောအစက်အပြောက်အားလုံးကို ဖုံးအုပ်နိုင်သော ကျယ်ဝန်းသောအလင်းတန်းဖြင့် အညီအမျှ တောက်ပစေကာ သုံးစွဲသူများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် သင့်ထုတ်ကုန်များကို အကောင်းဆုံးပြသနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
အခဲတံခါး သို့မဟုတ် မှန်တံခါး
ယူနစ်များကို အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မှန်တံခါးများ သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲတံခါးများဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ စတိုးဆိုင် သို့မဟုတ် စားသောက်ဆိုင်တွင် ၎င်းတို့၏ အချိုရည်များနှင့် အစားအစာများကို ပြသရန် မှန်တံခါးသည် ပြီးပြည့်စုံသည်။ ခိုင်မာသောတံခါးသည် အအေးခန်းအတွင်းရှိအရာများကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် thermal insulation တွင်ပိုကောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုံမှန်မော်ဒယ်များပေါ်တွင် အခြေခံ၍ သင့်ရွေးချယ်စရာများအတွက် အခြားကွဲပြားခြားနားသော အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ယူနစ်များကို စုစည်းနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်မော်ဒယ်များသည် ပုံမှန်အတိုင်း မျက်နှာပြင်လက်ကိုင်ပါရှိပြီး အချို့သော အထူးအမျိုးအစားများဖြစ်သည့် လှည့်ခြင်း၊ လော့ခ်ချခြင်း၊ အနားယူခြင်းစသည်ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
စံအရောင်များအဖြစ် အဖြူရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အနီရောင်နှင့် ငွေရောင်တို့အပြင် သင့်ရွေးချယ်ခွင့်အတွက် အရောင်မျိုးစုံရှိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေခဲသေတ္တာများနှင့် ရေခဲသေတ္တာများသည် သင့်စိတ်ကူးနှင့်အညီ အခြားစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်များရရှိနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ထူးခြားသောစတိုင်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည် .
Brand Awareness အတွက် စိတ်ကြိုက်ဂရပ်ဖစ်များ
တစ်ဦးချင်းစီအရောင်များအပြင်၊ သင့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် စတိုင်များကို မီးမောင်းထိုးပြရန်၊ သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏ အသိအမြင်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် သင့်အချိုရည်နှင့် အစားအစာများအတွက် အရောင်းမြှင့်တင်ရေးမြှင့်တင်ရန် အံ့မခန်းဂရပ်ဖစ်နှင့် အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် ကိုယ်ထည်နှင့် lightbox တို့ကို တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Etching ပုံစံများ
တံခါးနှင့် ဘေးဘက်မှန်များကို သင့်လိုဂိုနှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့် ထွင်းထုနိုင်ပြီး ၎င်းကို LED မီးဖြင့်လင်းသောအခါတွင် လှပသောအလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသနိုင်သည်။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ဂရပ်ဖစ်ပြသမှုနှင့်အတူ၊ ဖောက်သည်များကို ဖမ်းစားရန် သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပြီး အမှတ်တံဆိပ်ပါ နမူနာများ
Countertop Cooler ၊
Nenwell မှ သင့်ရေခဲသေတ္တာများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နည်း
သင့်အကြံဥာဏ်များနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါ။
လျှောက်လွှာများ။ (ဘား၊ စတိုးဆိုင်အတွက်သုံးသည်)
အပူချိန်အကွာအဝေး: 0~8°C / -25~-18°C။
ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ နှင့် လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်။
အပြင်ပိုင်းနှင့် အတွင်းပိုင်းအတိုင်းအတာ။ (ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးအစားများမှ မော်ဒယ်များကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။)
ရွေးချယ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ။ (လက်ကိုင်များ၊ တံခါးအမျိုးအစားများ၊ မှန်များ၊ သော့ခလောက်များ၊ LED၊ အချောထည်များ စသည်တို့ပါ၀င်သည်)
ဒီဇိုင်းပုံစံများ။ (သင်၏လိုဂို၊ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်စတိုင်များဂရပ်ဖစ်)
… (သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ အသေးစိတ်ပြောပြရင် ပိုကောင်းမယ်!)
Nenwell သည် စျေးနှုန်းကိုးကားချက်နှင့် အခမဲ့ဖြေရှင်းချက်များကို ပေးသည်။
သင့်လိုအပ်ချက်များကို လုံလောက်အောင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည် သင့်လိုအပ်ချက်များအပေါ် စစ်တမ်းတစ်ခုကောက်ယူပြီး သင့်သုံးသပ်ချက်အတွက် အခမဲ့စိတ်ကြိုက်နှင့် တံဆိပ်ရိုက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်နှင့် စျေးနှုန်းကိုးကားချက်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါမည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ (အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အပါအဝင်)
စျေးနှုန်းများ (မှိုများ၊ နမူနာများနှင့် အသုတ်မှာယူမှုများ အပါအဝင်)
ပေးပို့ချိန် (မှိုများ၊ နမူနာများနှင့် အသုတ်မှာယူမှုများ အပါအဝင်)
ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကြိုက်နှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များနှင့် စျေးနှုန်းကိုးကားချက်များကို သင်အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်၊ သင့်အား စပေါ်ငွေပေးချေမှုအတွက် အရောင်းစာချုပ် သို့မဟုတ် ပရိုဖော်မာပြေစာအား ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင့်နမူနာများ သို့မဟုတ် အတွဲလိုက်အမှာစာများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ အပ်ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံရရှိကြောင်း ပံ့ပိုးပေးထားသော ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရေး တာဝန်ခံအဖွဲ့ထံသို့ သင်၏ ဝယ်ယူမှုအမှာစာနှင့် ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကို စတင်ပေးပို့ပါမည်။ ဤအရာအားလုံးသည် နမူနာများအတွက် ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုပြီးသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါအတိုင်း အချက်အလက်အချို့ကို တင်ပြပါမည်။
သင့်စိတ်ကြိုက်ရေခဲသေတ္တာများ (အအေးခံစက်) သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာများ ထုတ်လုပ်စဉ်အတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံများ။
ကုန်ပစ္စည်းများ ပြီးစီးပြီးနောက် ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံများ။
အရည်အသွေးနှင့် စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ စစ်တမ်းအစီရင်ခံစာ။
အထက်ဖော်ပြပါအရာအားလုံးကို သင့်ဘက်မှ အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား စမ်းသပ်ရန်အတွက် စိတ်ကြိုက်နမူနာများကို ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်ပေးပါမည်။ အင်္ဂါရပ်များနှင့် အစိတ်အပိုင်းများကို ပြုပြင်မွမ်းမံရန် သို့မဟုတ် မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါက၊ သင့်အတည်ပြုချက်အတွက် ဒီဇိုင်းနှင့် စျေးနှုန်းကို ပြန်လည်နမူနာအဖြစ် ပြောင်းလဲပါမည်။
Batch Orders အတွက် ထုတ်လုပ်မှု
နမူနာများအားလုံးကို သင်စမ်းသပ်ပြီး အတည်ပြုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် batch အော်ဒါများအတွက် ထုတ်လုပ်မှုဆီသို့ ဆက်လက်သွားပါမည်။ ထုတ်လုပ်မှု လုံးဝပြီးသည်နှင့်၊ လက်ကျန်ငွေပေးချေမှုကို သင့်အား အကြံပေးမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ပို့ဆောင်မှုကို စီစဉ်ပါ။